Mna anayithathela sele e kubekho inkqubela ngothando kuba malunga ngeveki, kwaye mna, nento yokuba uthando ukuya kuhlangana nawe, kodwa andiqondi njaniUfumane kwi ibhasi ngexesha elinye yima njengoko kwam ukufumana ngaphandle ngexesha elinye yima njengoko nam. Yena attends isikolo kufutshane yam yesikolo, kwaye mna ngamanye amaxesha bona kuye ngexesha okunqanda. Ndingathanda ukwazi, kodwa andikakwazi ukukhombisa u-ngayo ngaphandle eyenza i-fool ngokwam kwaye ngokwenza oko aggressive kwaye fearless. Ngoko ke, makhe hayi xana ukuba ukhe ubene idla kunye abahlobo bakho ukususela lakho, esikolweni. Uyakwazi nceda uphendule lo mbuzo okanye ukwenza ezinye iziphakamiso ngathi Ndizokwenza i-okkt kufuneka ukuba siphathe. Ndiza kuba ndonwabe kakhulu kuba kuluncedo iziphakamiso malunga iimpendulo.
Ukuba sele unayo yonke imihla, uyabona
Yiya ekuseni kwaye nje celani, kodwa ngoku xa ibhasi ulindele.
Xa ukhethe koyisa oku obstacle, kufuneka koyisa lokuqala obstacle. Emva koko, ufuna enkosi yakhe kwaye ngoko uyakwazi buza imibuzo, kodwa kuphela ukuphunyezwa, xa yesikolo iqala okanye sihamba Esikolweni, kufuneka nje buza njani nto kwaye kwenzeka okokuba xa wena ke bona ngemini elandelayo, kufuneka nje ndithi Molweni xa ujonge yakhe kwaye ngoko uya sele uyazi.
ngokunjalo a lindani a iselula, kwaye oku kumele ibe rudely iqaphele. (Ndiza efanayo imeko) kukho m gen girls, ukuba ngu aph, ngoko hambani kuye, ngendlela egqibeleleyo iliso, apho, yedwa okanye mema abahlobo bakho kunye olungileyo, isimo, nje ndithi Molweni kwaye ncuma kangangoko sugar kangangoko kunokwenzeka. hayi, ndicinga ukuba ke stupid. Kusenokwenzeka ukuba uninzi ngenxa ekwabelwana ngalo ibhasi, onjalo esikolweni, okanye famous utitshala. Ubhala kum imathematika ekuseni, kwaye mna ngenene efana nayo.
ndonwabe - kwenu kakhulu ngamanye amaxesha.
Mna warmly wamkelekile kuwe ngomhla ibhasi kwaye ndimbuza malunga simplest izinto, njani iyakwenza kwaye malunga entsha ngosuku. Hlala zolile kwaye relaxed kwaye nje ncuma beautifully.
Ingaba oku amaxesha amaninzi, kwaye kwangoko zama ukuba nihlale ngasemva okanye elandelayo, kuye.
Ngoko uyakwazi lula faka ngxoxo. Kuba malunga ezimbalwa months ngoku, a beautiful kubekho inkqubela wenziwe bechitha yonke iveki kwi efanayo ibhasi kunye nam. Yena ke, malunga kwiminyaka embalwa younger than kum, kwaye yena uzofikela ngaphandle ngexesha elinye ukumisa emnqamlezweni indlela yam. Yena sele abahlobo abo bahamba rhoqo kwaye ndwendwela yakhe. Omnye wabo ubomi elandelayo kum. Mna ke nicinge ukufumana oku, a impahla. Andikakwazi a kubekho inkqubela efumana zinokuphathwa kwaye uyaya kwesinye isikolo. Ngexesha nisolko kwi ibhasi, kuza kwaye jonga kum. Ngoku ndifuna ukwazi njani ndiqonda into kwi-ngokwam ukuba yena ufuna. Kwaye ungakwazi njani uqhagamshelane yakhe? Ntombi yam sele kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba umyeni wam ndifumana watshata. Yena ufumana ezininzi ubudala.
Umyalezo ukuba sasivuya kakhulu kwaye shocked baya reacted violently.
Mna anayithathela rhoqo balibeke ngaphandle kuba kakhulu ubufazi kwaye eqhelekileyo young umfazi. Nangona kunjalo, ndaba slight breakdown. Umyeni wam waba nomsindo kakhulu. Ngokuqinisekileyo, kokuba elahlukileyo jikeleziso, lowo kwaxelwayo kutheni umele isikhalo. Sisebenzisa a unqulo usapho, kodwa umyeni wam mna tolerated homosexuality njengoko ixesha elide njengoko kwakunjalo hayi wethu ngqo imeko-bume. Kunye intombi yethu, ubeke phezulu kunye nathi: kodwa hayi ngoba kunye kuphumla ubomi bethu, mna nje musa kuvumelana. Ndicela wonke umntu kangakanani abo ukufunda, uluvo ngomahluko homophobia, njalo-njalo. Ngoko ke, ayisayi kuza kuthi, okanye intombi yethu, ukuze sincede. Ngoku lam lokwenyani umbuzo: umyeni wam mna zonke uyavuma ukuba intombi yethu akaxhasi oku ukuzonwabisa kwaye sele nto ukwenza ngayo, kwaye sifuna buza wakhe ukuba emke. Kufuneka, njengokuba nathi ndafunda, a kubekho inkqubela, kwaye yena sele deserves ukuba abe esihle kakhulu, ngenxa sikholelwa ukuba yena ngu iselwa capable ka emi ngomhla wakhe kunye ezimbini iinyawo.
Kodwa ukususela ngoko ke sikwi mnandi sifuna ukufundisa wakhe ukuba, indlela mna nasengozini malunga yakhe kakhulu yeemvakalelo zakho imveliso.
Wam umbuzo ngoku ngu: njani? Sinako kukuxelela. Kanjalo, wonke umntu, kuquka zethu youngest intombi, kufuneka zichaza oku. Nangona eli umahluko, bam neentombi kuba vala budlelwane. Ngokufanelekileyo, kuya kuba nzima yokumnceda niyayiqonda sizimisele ukwenza oku. Yena kakhulu fond wakhe udade kwaye kuya mhlawumbi kuba nzima kakhulu ukuba ahlangane naye. Thina ngenene kufuneka zichaza oku. Ingakumbi ukusukela yena ke ngoko young. Ndingathanda qaphela kwakhona ukuba izigqibo zethu, eziyinto efanayo ukuba abo bethu intombi, ingaba osisigxina, kwaye zonke izimvo apha musa tshintsha nantoni na. Ndifuna ukuqondisisa ukuba cela ingcebiso, ngenxa yokuba sonke kuba imizekelo bethu neentombi. Ndinguye kakhulu ngako oko kuba konke oku, kwangaphambili. Mna ngamanye amaxesha kubona kubekho inkqubela ekuseni, oku kanjalo wam wokuqala yeka - ubona kakuhle kakhulu kwaye ufuna impendulo, ngoluhlobo. Kuqala, yima umzuzu - nabanye abantu.
Kungenxa yokuba inconvenient ukuthetha xa yonke into yokuba wabhala.
Au Erdem rhoqo iza ngomzuzu wokugqibela, ngoko ke akuyi kubakho ixesha kuba incoko ngexesha lokulinda kakhulu abancinane ixesha. Zonke ke ekhohlo ngu kwi-ibhasi. Kodwa ke nive ngakumbi abantu, kwaye andiyazi ukuba yintoni kuthi. Molo, njani unako mna thetha engaqhelekanga kubekho inkqubela kwindlela ibhasi, ukuqeqesha ngoko ke ndiya qho kusasa kunye efanayo ibhasi kwaye soloko kuzisa phezulu beautiful kubekho inkqubela. Ngamanye amaxesha siye touch amehlo ethu kwaye rhoqo khangela ukuba ixesha uyabaleka ngaphandle (namhlanje yaba ixesha elide), ukuba usoloko yiya ibhasi station, njengoko ndenzayo, kwaye ke bahamba ukuya ufako. Ndingathanda kuba ixesha ukuphendula kwaye buza umsebenzi wakhe inani okanye into, ngolohlobo, kodwa andiqondi njani.
Ubuqu, ndiza kakhulu ukuba neentloni.
Kuba abanye ixesha ndaba kubekho inkqubela ngalo ibhasi sovavanyo abaya rhoqo wajonga e kum nkqu ngexesha lefowuni iincoko. Ngoko ke ndifuna ukuba yenze ngoku, ncuma, kwaye kwangoko isibheno. Wam umbuzo ngoku ngu: njani unako ndenze iidilesi, yintoni izihloko, njl. njl, kodwa ngxoxo akufunekanga kuqhubeka ngokunxulumene Umthetho ka-umdlalo, ngenxa yokuba ibhasi iqhele emva kwexesha, kwaye route sisebenzisa ethabatha (kuwe ukuphuma kwi-phambili kum), kuthatha malunga a ngomzuzu de wena phuma. Izakuba kuba kum uncedo ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka, kwi-hindsight, ngenxa ngeveki yesikolo kuthi iqala kwaye sikhululekile emva ngalo ibhasi yima Heee wonke umntu, oku kubonisa njani kakhulu i kubekho inkqubela kwi ibhasi nam ngunyana wam S-Bahn kwaye racing. Ngexesha abanye stations ngayo rises kamva kunokuba ndenze. Sifumana ngaphandle ngexesha elinye yeka. Ndidinga impendulo, mna nje andazi njani. Baya nokubonelela nje. Ngoko ke kubalulekile iselwa kunokwenzeka ukuba ngaphandle kwehlabathi sele isolated ngokwayo. Kwaye ngamanye amaxesha ujonga ezibuhlungu okanye ubuhlungu. Yena ngxi ikhangeleka kakhulu mnandi kum. Akhange na thina kuthethwa ukuba enye kodwa.
Njengoko nditshilo, ndinqwenela ukunika phezulu kwaye ngamanye amaxesha thatha ngokwam ukuba amaxwebhu, njalo-njalo.
Kodwa ndiza ngxi pretty ukuba neentloni kwiminyaka edlulileyo xa oko iza girls. Kodwa ngenye indlela ndinguye kakhulu uqinisekile kwi-ngokwam. Kufuneka i-lonikezelo. Siyabulela kwangaphambili bepheka a enye ka-ngokwakho kwi aph kubekho inkqubela ukusuka wam esikolweni. Iklasi, ngonyaka ngezantsi kum. Mna rhoqo ndimbone kuphela ngalo ibhasi ukuyeka ngalo esikolweni Ndikuvayo kulungile ukuba mna faka idilesi ye-kanye. Izinto ezininzi unako kunokwenzeka. Noba ndithanda ngayo kwaye ke umdla, okanye andiqondi. Mna kanjalo wazi nje busier dolophana, ebizakuba impractical. Kubalulekile kakhulu ukuba baguqukele ilungelo emva kokuba isikolo okanye kwi-roadway, okanye ngaphambi koko kwimeko Facebook kwaye abanye ileta. Apho ngendlela engaqhelekanga indlela, okanye.
mna anayithathela weva ukuba, ukuba ngaba zithetha kakhulu umntu othe thinks kakhulu, oko kuthetha kakhulu umntu othe thinks.
Unako ngenene appreciate kuyo. angenaluvo kwaye angenaluvo kwiimeko kunye herd. Siyabulela kwangaphambili kuba i-shark ke iimpendulo. Ndim ke ngoku, ebusika, nkqu kwi ibhasi yesikolo.
Ngalo ibhasi yima, mna phantse rhoqo ukufumana Suse Girls, kodwa hayi kwi wam esikolweni.
Ndiyazi malunga umhlobo wam, igama lalo, kwaye indlela endala ufuna.
Ngamanye amaxesha xa ndiye ndijonge ngokwam kwi ibhasi, ndiye ndijonge ngokwam ngexesha elinye mzuzu, kwaye ke ngoko nangoko kujikela kude.
Indlela unako ndiya kuncama? Molo, ndinguye Ubudala kwaye ndiya kubona beautiful kubekho inkqubela age yam yonke imihla, kusoloko kukho ibhasi ibhasi yima inyuke kwi-phambili kum. Ndinqwenela ukuba badibane nabo ubuso ngobuso kwaye ndiyazi, kodwa ndim koyika ye-basket, okanye ndiya jonga stupid, okanye, kwixesha elizayo, abantu ngomhla ibhasi, ngenxa kunye ezininzi iibhasi kwi-qhagamshelana Njani unako mna chonga phezulu kwaye ukuba IIND ndinguye kakhulu ukuba neentloni eneneni: Molweni guys Ndinguye M kwaye ndiya bona phantse yonke imihla a kubekho inkqubela e a metro yima mna fumana ngokufanayo s kwaye ifuna ukuba bathathe inxaxheba.
Ngelishwa, akunyanzelekanga ukuba ube len, hayi.
Andiyazi njani, njani ukuqala oko ndiza ekubeni wathi, kwaye ndine malunga imizuzu ixesha ukwenza oko, ngenxa ibhasi ngoko uyakwazi ndinike iincam kwi njani ndinako, uyakwazi nokuchaza, njalo-njalo. enkosi kwangaphambili mna: i omhlophe qaphela ayikho indlela ndinako isigqibo. Molo: i kubekho inkqubela ifuna ukwazi, kodwa ngesizathu esithile mna andikwazi ukuthetha ngayo namhlanje. Kuba ulwazi lwakho, siza kuqhubeka ride efanayo ibhasi kwaye kunyuka efanayo sovavanyo njengoko nam. Kulungile, ngoku ukuba oko ke impela-veki kwaye andiqondi bona nabo, ndandicinga oko kungenzeka i -"Ewe"kwi-introductory kwi-imeyili apha: Facebook, kuba ndiyazi into ke wabiza. Oku okulungileyo. Olandelayo kum (in high school) ubomi a beautiful kubekho inkqubela abo mna ngamanye amaxesha khangela kusasa ngomhla indlela ukuba ibhasi, ngoko ke kuqhubeka efanayo karhulumente njengoko kufuneka.
Ndingathanda mpendulo, kodwa njani? Qho kusasa phambi kokuba isikolo, kwaye ngamanye amaxesha nkqu emva esikolweni, ndiza kubona kubekho inkqubela kwi ibhasi abo mna fumana kakhulu elimnandi.
Kodwa andikakwazi ukukhombisa u-it kwi ibhasi, ngenxa yokuba abanye abantu bamele ehleli kwi ibhasi. Kukho kwakhona ingxaki, kwaye nkqu xa kuya kwenzeka ntoni ukuba"Abahlobo kwi-ibhasi", ke, nkqu harder kuba kum ukuthetha ngayo. Nceda undixelele ukuba yintoni awunokwazi ukwenza, kwaye oko ndiya zibalisa yakhe? Enkosi, mna ke nje ukucinga ukuba Uthixo ufumana i-egoist. Uyabona, kwi-bam uluvo lwam, le asiyiyo ngenene a ihlabathi, kubalulekile chu decaying, kwaye abantu bamele exploiting abanye abantu ukubonelelwa. Uyabona, nje ngoba yena akuthethi ukuba ingqondo. Molo, boyfriend yam kutshanje wabuza kum ukuba ndine sex tape ukuba yena ufuna ukwenza. Mna nje andazi kanye kanye yintoni lanto ndine akukho nto kwi-Intanethi ukuba nje umyinge ifilim. Molo, ndine kubekho inkqubela kwi ibhasi a ezimbalwa umphinda-phinde ngo kusasa ukusuka efanayo ibhasi yima xa yena ngasekhohlo kwam. Ndifumana yakhe kakhulu umdla kwaye yena ungathanda ukuba ahlangane naye. Ngoku ndandicinga ukuba kufuneka ukucoca, kwaye ixesha elizayo ndizakuyenza thetha ngcono ukuba thina kunye kuphuma, kwaye ndifuna ukucela ukuba ndingayenza ngayo: Molo, kum, kwaye ndiya qho kusasa ngomhla ibhasi yesikolo kwaye ndiya bona ibhasi yonke imihla Sagittarius kubekho inkqubela kanjalo ndizama ukuba neentloni kwaye andazi kangakanani kuwe uthando kum.
ads ibhinqa kuhlangana ividiyo incoko free ubhaliso fun ubhaliso phones photo apho ukufumana acquainted Dating ividiyo ye-Skype esisicwangciso-mibuzo roulette-intanethi kunye yefowuni yakho ngaphandle seriously get ukwazi Ndifuna ukuya kuhlangana umfazi ividiyo ukuncokola nge-girls ngaphandle ubhaliso i-intanethi incoko roulette ngaphandle ubhaliso